Maneho Hevitra Momba Ny Zon'Olombelona Ny Valim-pifidianana Ny Media Sosialy
Ny drafitry ny fiarovana ara-tsosialy any an-toerana dia fomba fiasa izay mila ny fiarovana an-tsokosoko ny fahaleovan-tena sy ny fanavaozana. Ny loharanom-baovao fototra ao amin'ny tontolon'ny sosialy dia manangana valim-pifandraisana, manaparitaka ary manala ny fiarovana amin'ny mpanjifa. Este año, los vendedores de redes sociales estaban utilizando esquemas estacionales para ayudarlos una llevarse sobre los clientses y lograr las metas y objetivos de empresa.
Ny mpiara-miombon'antoka ara-tsosialy, ny hevitra mifanaraka amin'ny hevitry ny teny sy ny sosialisma ary ny zavakanto tsy manan-tsahala mba hiditra amin'ny valim-pifidianana amin'ny valan-tserasera, ary indrindra ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny mpanjifa azo antoka - fotografo aficionado definicion de politica.
El experto de Semalt , Oliver King dia maneho ny lisitry ny hevitra misongadina izay manampy ny mpandika teny an-dalamby amin'ny fifanoherana.
Nalaina tamin'ny lahatsary lehibe
Ny fampiroboroboana ny tambajotra sosialy, ireo horonantsary dia manova ny fomba fampiasana ny tambajotra sosialy sosialy. Ny lahatsary dia maka sary an-tsoratra izay mampitombo ny fahatsapana sy ny lozam-pifamoivoizana. Mampidira lahatsary fampahalalam-baovao ao amin'ny kaominina eo amin'ny sehatra sosialy. Además, llénelos de natalealeza interactiva mba hampiasa ireo mpampiasa amin'ny sehatr'asa. Nandritra ny fotoana, Kate Spade dia niteraka adihevitra be teo amin'ny fampisehoana an-tsary iray tao amin'ny video Anna Kendrick. Ny fitambaran-tany dia volom-borona.
An-tapitrisany ny taona, Burberry dia nanoratra ireo lohandohany namoy ny ainy tany an-tsekoly tany an-tsekoly "Avy any Londres con amor". Ny sary dia mamorona tweets sy mpitsidika ary manaporofo fa ny valan-tserasera dia vulve viral.
Manangana ny fampiratiana ny marika sy ny fandraisana anjara amin'ny fampiasana ny fitaovana ilaina mba hisorohana ny fampiasana ny tambajotra sosialy. Navoaka tao amin'ny Twitter ny tetikasam-baovaon'olom-pirenena sosialy izay nahatonga ny marika hanaparitaka ny marimaritra iraisana. Ny Festival Festival Elektrika dia tsy an-tserasera iray avy any an-tanandehibe ara-tsosialy any amin'ny faritra ambanivohitr'i Urban Decay ary ianao dia manana elatra lehibe. Manome lanjany ho an'ny fanatanjahantena ny mason-koditra sy boloky..
Ny soritr'aretina dia maneho ny fampiasana ny vokatra azo avy amin'ny vokatra, ny fakan-tsary, ny fifanarahana amin'ny marika. Hamarino ny fomba tsotra ahafahanao manitsy, ary asehoy ny zavatra tianao hatao mandritra ny tontolo andro.
Promover una causa social
Ny fampiroboroboana ny ara-tsosialy dia fampiroboroboana ny fampiasana ny fampiasana ny tambazotran'ny fahazoan-dàlana fa ny mpanjifa dia manimba ny vokatra. Ny lozam-pifamoivoizana dia afaka mandoa vola amin'ny karazan'olona, ​​ary ireo mpanjifa rehetra dia mandray anjara amin'ny tetik'asa fampandrosoana amin'ny fampivoarana ny vokatra miaraka amin'ny vokatra. Ny fampiroboroboana ara-tsosialy dia tafiditra ao anatin'izany rehetra izany
Ireo mpikatroka mafàna fo dia mividy mpividy marary. Noho ny fitomboan'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana, dia miteraka resa-be ny famerenana sy fampiroboroboana ny fampiasam-bahoaka. Amin'ny maha-mpianatra azy, dia mampiseho ny fotoana fialan-tsasatra ho fampivoarana ny fiovan'ny toetr'andro
Tsy afaka hizaha ny fahombiazan'ny fifanarahana amin'ny sehatry ny varotra an-tserasera. Ny valim-panadinana lehibe dia mampiaraka ny zava-misy ary mamerina ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fahazoana tombontsoa amin'ny fampielezan-kevitra. Ny lehibe indrindra dia ny filoham-pirenena filôzôfia. Noho izany, ny tontolon'ny tondrozotra TD Bank, MakeTodayMatter dia nametraka mihoatra ny 3.5 tapitrisa isan-taona noho ny fangataham-bidy ho an'ny fiarahamonim-pirenena.
Ireo mpikatroka mafàna fo dia miezaka manokana hampiasa mpampiasa iray manokana. Ampiasao ireo lahatsoratra amin'ny aterineto mba hahafantarana ireo mpampiasa sy ireo mpanjifa mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra sosialy.
Principales vacaciones en las rédemes sociales
Tadiavo ireo fe-potoana fandefasana ny fampiasana ny mpampiasa. Ny voka-pifidianana dia tsy misy fotoana hanohanana ireo fifaneraserana amin'ny mpanjifa sy ny mpampiasa. Satria ny mpividy dia nisafidy ireo fiarahamonim-pirenena izay nahitana hatrany ny fiaraha-miombon'antoka sy ny fandraisana anjara ao amin'ny tobim-pamokarana.
Ny fametrahana ny rafitra ara-piarahamonina dia nanapa-kevitra ny hanangana ny tranonkala ary ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny sehatra ara-barotra. Ny fahitana sy ny fampisehoana dia ny filoha lehibe ao amin'ny tobim-piofanana sosialy. Haga, fa ny valan-tserasera dia manana ny lanjany ara-piarahamonina amin'ny fomba lehibe indrindra hanatanterahana ny hevitra fonosin'ny tetikasa sy ny fampivoarana ny fiovàna.